Jordania: Natsangana ny lalàna momba ny heloka bevava amin’ny rafi-baovao nasiam-panovana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Marsa 2019 3:33 GMT
Taorian'ny antso avy amin'ireo fikambanana Jordaniana lehibe mpampita vaovao amin'ny aterineto, ny Foibe ho an'ny Fiarovana ny Fahalalahan'ny mpanao gazety مركز حماية وحرية الصحفيين, ny vondrona mpiaro ny zon'olombelona, ny media sy ny mpikatroka momba ny lalàna, ary koa ireo olona voakasika amin'ny olan'ny sivana sy ny fahalalaham-pitenenana sy maneho hevitra, nofintinina tao amin'ity Aramram Feature ity ny fanovana lehibe nitranga tamin'ny lalàna vaovao momba ny heloka bevava amin'ny rafi-baovao any Jordania, قانون جرائم انظمة المعلومات izay sambany nisy karazany toy izany.
Mameno ny banga ao amin'ny lalàna
Talohan'ity lalàna ity, dia tsy nisy lalàna na rafi-dalàna mifehy ny famoahana “heloka bevava antserasera”, anisan'izany ny olana mifandraika amin'ny sary vetaveta misy ankizy, ny fanararaotana ireo olona sembana ara-tsaina na ara-pihetseham-po, ary ny fanaparitahana vaovao izay natao hanohintohina ny tombontsoa ara-toekarena sy ara-politika Jordaniana .
Ity dingana voalohany ity dia natao hanangana fototra ara-dalàna hiatrehana ny olana rehetra mifandraika amin'ny hetsika heloka bevava mifototra amin'ny aterineto manokana. Na izany aza, naneho hevitra momba ny fahefana voalohany natolotry ny volavolan-dalàna voalohany (toy ny fikarohana ny trano sy ny ordinatera tsy misy didim-pitsarana) ireo vondrona mpanaramaso sivily ary nangataka fanazavana, mba tsy ho ampiasaina sy hararaotina hikendrena ireo tranokalam-baovao sy ny fahalalahana maneho hevitra ireo fahefana vao noforonina ireo.
Nifangaro ny fanehoan-kevitra momba ny lalàna vaovao. Ny sasany mahita izany ho toy ny dingana mihemotra, toy ity mpisera Aramram manoratra ho Anti-7afartalism, maneho hevitra momba ny tranonkala Aramram mikasika ny horonantsary etsy ambony:
Mametraka an'i Jordania ao amin'ny lisitry ny fanjakana mihemotra amin'ny aterineto io lalàna vaovao io taorian'ny voalaza tao amin'ny World Records Guinness fa manana cybercafe miely eraky ny arabe sy haingam-pandeha indrindra i Jordania … Raha tokony handroso isika dia mihemotra ary nivoaka tao amin'ny ‘Washington Post’ ity tranga ity !!! Satria fantatra amin'ny anarana hoe ‘firenena Arabo malalaka indrindra’ i Jordania, koa ahoana no nitrangan'izany !!!
Na izany aza, taorian'ny fanitsiana, miandry ny tohiny ny hafa ary nanaparitaka vaovao momba ny fanitsiana tamin'ny alalan'ny twitter. Noor JoJo (nrbi2) nisioka hoe:
Fiovana manan-danja amin'ny Lalàna vonjimaika momba ny heloka vava amin'ny rafi-baovao … ary ao amin'ny endriny farany ny votoatin'ny lalàna…..
abeeryarmouk koa nisioka hoe:
Filohan'ny Holafitry ny Mpisolovava ao Jordania: Namarana ny adihevitra manodidina azy ny fanovana ny Lalàna momba ny heloka vava amin'ny rafi-baovao.
SamirKassireyes nisioka hoe:
Novain'ny governemanta Jordaniana ny “Lalàna momba ny heloka bevava amin'ny Rafi-baovao” taorian'ny fanakianana sy ny tsindry teo an-toerana.
Valintenin'ny governemanta manoloana ireo tsikera sy teritery
Hitan'ny sasany fa dingana tsara amin'ny fananganana fifandraisana eo amin'ny vondrom-piarahamonin'ny aterineto sy ny lalàna ny fahavitrihan'ny governemanta hanova ny lalàna ho setrin'ny fikatrohana. Mibilaogy ao amin'ny Jordanoholic.com, Rani Dababneh manoratra hoe:
Raha jerena ny [[Bilaogera Jordaniana nihaona tamin'ny minisitry ny TIC hiresaka momba ny volavolan-dalàna mifehy ny heloka antserasera tao Jordania], dia nampahafantarina izahay fa nankatoavin'ny Kabinetra ny Lalàna 2010 momba ny heloka bevava amin'ny rafi-baovao tamin'ny 3 Aogositra izay hanan-kery afaka 30 andro aorian'ny famoahana ampahibemaso. Eto ambany amin'ny teny Arabo ny Lalàna momba ny heloka bevava amin'ny Rafi-baovao sy ireo Antony : [omena tsy ho ela ny dikan-teny amin'ny teny Anglisy)
VAOVAO FARANY: Nankatoavin'ny governemanta Jordaniana tamin'ny 29 Aogositra ny volavolan-dalàna farany amin'ny Lalàna momba ny heloka bevava amin'ny Rafi-baovao (Lalàna mifehy ny heloka atserasera) rehefa avy nanitsy ampahany maromaro tamin'ny lalàna izay niteraka adihevitra sy tsikera avy amin'ireo mpikatroka zon'olombelona sy ireo mpikatroka media.
Avy amin'ny blaoginy ao amin'ny Osamaa.com, nizara fomba fijery ihany koa i Osama Romoh أسامة الرمح fa dingana tsara ny fampidiran'ny governemanta ireo bilaogera ao anatin'ny dingana sy ny fahavononany hihaino ny ahiahin'ireo vondrona sivily. Hoy izy nanoratra:
Tamin'ny teboka tsara iray hafa nanampy ny isan'ireo bilaogera Jordaniana manoloana ny fankatoavana ofisialy, dia nampiditra bilaogera vitsivitsy hiadihevitra momba ny volavolan-dalàna heloka bevava amin'ny rafi-baovao ny Minisiteran'ny Teknolojiam-baovao sy ny fifandraisana.
Ahitana ny lahatsoratra feno amin'ny dikan-teny farany misy ny lalàna vaovao sy ireo karazana fanovana izay notakian'ny teriterim-bahoaka ny bilaogy Radical Justice العدالة الراديكالية.